Garabka Jowhar Oo Wadamada Igad Iyo Adduunka Intiisa Kale Ay Ku Diidey Dowladnimada Ay Is Moodeen
Taageerayaasha iyo siyaasiyiinta joogta Jowhar ee xaruunta u ah garabka Jowhar ayaa aad uga xumaadey burburkii ku yimid ka baaqsigii wasiirada IGAD kulan la sheegay iney ku qabsan lahayeen Magaalada Jowhar. Afhayeen u hadlay wasaarada Uganda oo mataleysa shirgudoonka IGAD ayaa ka jawaabtey martiqaad ka soo yeerey Jowhar, kuna tilmaantay in la marin habaabiyey kooxdaas aysana jirin shir lagu qabanayo Jowhar. Afhayeenkaas ayaa ka muujiyey murugo qasaarada qaban qaabadaas lagu diyaariyey, isaga oo u soo jeediyey iney joojiyaan qaban qaabadaas aan la ogeyn ayna baarayaan sida uu ismaandhaafka qaladkaas uu ku dhacay iyo cidda loo tiranayo oo loo maleynayo Itoobiya waxa ay ugala jeedey ku hadlida magaca shir gudoonka IGAD.
Wadamada Igad ayaan sinaba aysan suurtogal uga ahyn iney naftooda ku soo biimeeyaan degmada Jowhar oo ah magaalo aan lahayn wax horumar magaaleeda sida gaadiid, Dhismayaal caalamiya, Isbitaalo, iyo garoono la isku aamini karo.
Marka laga reebo dowlada Itoobiya, inta kale wadamada IGAD kooxda Jowhar uma arkaan dowlad, mana aaminsana iney dhaqaale ahaan ka bixi karto shir ay martigeliyaan oo dhexdhexaad noqon kara. Waxeyna qabaan kooxda Jowhar inta aysan shir goboleed ku hamin iney marka hore nabad la galaan kooxaha hubeysan oo ay isaga soo horjeedaan duleedka Jowhar iyo xuduuda Balcad.
Qasaaraha soo gaarey kooxda Jowhar oo ay ku bixiyeen qabanqaabada shir beenaadkaas ayaan weli la soo gudbin, waxaana ilo lagu kal soonaan karo ay sheegayaan qasaarahaas iney bixiyaan in lagu soo qaaday codsi lacageed laga dalbaday wadamada Carabta. Garabka Jowhar ayaa dhowaan wafdi ka yimid Jaamacada Carabta waxey ka codsadeen saddex waxyaabood oo kala ahaa: kaalmo lacageed, hub iyo iney gacan ka geysato qaadida xayiraada hubka oo qaramada midoobey ay ku heyso Soomaaliya. Sidoo kale waxey ka codsadeen iney Jowhar ka furtaan xaafiis. Wararka ka imaanay Qaahira ayaa waxey sheegayaan ineysan hadda waxba ka qaban karin codsiyada garabka Jowhar inta laga helayo dowlad Soomaaliyeed oo ku shaqeysa Muqdisho oo aan lahayn garabyo iska soo horjeeda. Maxamed Dheere ayaa si gaara wuxuu uga codsaday in laga kireeyo guri dhisan, waxaana loo sheegay hogaamiye kooxeedkaas inuu furaha u sii hayo inta ay diyaar ka soo noqonayaan. Wafdiga jaamacada Carabta ayaa la filayaa iney Nairobi ka soo aadaan magaalada Muqdisho kadib markii ay kooxda Jowhar diidey iney gacan ka geysanayaan nabadgelyada safarkooda. Warar xaqiiqa ayaa sheegaya in Caamir Muusa oo ah xoghayaha guud ee Jaamacadda Carabta in uusan raali ka ahayn sida gaarkaa oo ay gooni ahaan wax ugu rabaan garabka Jowhar, isaga oo laga soo xigtey inuu imaanayo Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho.
Sidoo kale ayaa waxaa Midowga Yurub uu soo gaarsiiyey garabka Jowhar xilli Prof. Geedi uu isku diyaarinayo boqasho uu ku tago xaruunta ururka oo ku taala magaalada Brussels ee dalka Belgiumka iney dhamaatay wakhtigii loo qabtay xalinta khilafaadka aysana diyaar u ahayn deeq maaliyadeed oo ay ku bixiyaan mashruucyada ay sheegtay dowladu iney ka hirgelineyso Jowhar. Wafdi uu horkacayo danjiraha Midowga Yurub u jooga magaalada Nairobi oo u qaabilsan arimaha Somaliya Mr. Richard Hands ayaa fariintaas soo gaarsiiyey Col. C/llahi Yusuf. Kullan dhexmaray wafdigaas iyo Col. C/llahi ayuu korneylku ku dooday inuusan jirin khilaaf macno weyn leh oo hadda jira ama ay tahay in la dhameeyo. Wadamada Yurub ayaan diyaar u ahayn in loo arko kuwo macno darro lacag ugu shubaya koox ka mida hogaamiye kooxeedyada kala degen Jowhar iyo Muqdisho. Arrintaasna waxey xanuun weyn ku haysa madaxda Jowhar oo taagerayaashooda iyo maleeshiyooyinkooda ku madadaalinaya lacago fara badan oo Carabta, QM, iyo Yurub dhowaan uga kala imaaneysa.
Fashilka garabka jowhar ayaa ah midaan dheereyn inta ay ku jiraan gooni wax u raadsasho, iyagoo iska indhatiraya in albaabada deeqda ay xiran yihiin inta ay jiraan khilaafka xoogan ee ka dhex jira garabyada xukuumada lagu soo dhisay Kenya. Waxaa cad garabka Jowhar inuu sannadka cusub ku waaberisan doono burbur aan laga leexan Karin haddii la waayo lacagaha lagu galay balanqaadyadii ku dhisnaa beenta.